SHOW ပွဲမှာ သီချင်းဆိုဖျော်ဖြေနေတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်ကြောင့် ဝေဖန်မှု့တွေမြင့်တက်လာတဲ့ အဆိုတော် အုပ်စိုးခန့်……. – Cele Oscar
SHOW ပွဲမှာ သီချင်းဆိုဖျော်ဖြေနေတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်ကြောင့် ဝေဖန်မှု့တွေမြင့်တက်လာတဲ့ အဆိုတော် အုပ်စိုးခန့်…….
March 18, 2022 By L YC Knowledge
ပရိသတျကွီးရေ တဈခြိနျက အမိုကျစားသီခငျြးလေးတှေ နဲ့ မိနျးကလေးတှရေဲ့အသညျးကို ခွှနေိုငျခဲ့တာကတော့ အုပျစိုးခနျ့ ပဲဖွဈပါတယျ။ သူကတော့ အသကျငယျငယျလေးနဲ့အောငျမွငျမှုတှေ မြားစှာရရှိထားတာ ဖွဈပါတယျ။ သူရဲ့သီခငျြးလေးတှေ ကလညျး မိနျးကလေး ပရိသတျတှေ ရဲ့ အားပေးမှုကိုအပွညျ့ရရှိထားတာပါ။
ဒါပမေယျ့သူဟာ မကွာခဏဆို ဝဖေနျမှု တှခေံနရေတာပါ။ သူရဲ့လုပျရပျ ပုံရိပျလေးတှကွေောငျ့ နောကျပိုငျးမှာ ပရိသတျတှကေ သူကို ဝဖေနျမှုတှလေုပျလာကွပွီး နာမညျလညျးကခြဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ခုနောကျပိုငျးမှာ တော့ အာဏာသိမျးခြိနျ ကတညျးက ပရိသတျရှေ့ ပြောကျကှယျနခေဲ့တာဖွဈပွီး တဈခွားအနုပညာရှငျမြားနညျးတူ Boycott အဖွဈသတျမှတျခဲ့တာပါ။
ခုမှာတော့အဲ့လိုအခွတှေေ ကွားထဲမှာပါ အဆိုးဆုံး အရာတဈခုကိုလုပျလိုကျတာ ဖွဈပါတယျ။ BGF တပျဖှဲ့ဝငျမြားကွီးစိုးတဲ့ ကရငျပွညျနယျကရှာလေးတဈရှာရဲ့ဘုရားပှဲလေးမှာ သီခငျြးသှားဆိုခဲ့တာပါ။ မကွာခငျကလညျး နာမညျကြျောသရုပျဆောငျ မွငျ့မွတျ သှားခဲ့တာကွောငျ့အကွီးကယျြဝဖေနျခံနရေတာဖွဈပွီး ခုမှာလညျး သူကိုဝဖေနျနကွေတာပါ။ ဒါ့အပွငျသူ့ရဲ့လူမှုကှနျရကျမှာ ပါတငျထားတာကွောငျ့ ပရိသတျတှကေိုစျောကားသလိုဖွဈနတောကွောငျ့ ဝဖေနျသုံးသပျပေးကွပါဦးနျော။
ပရိသတ်ကြီးရေ တစ်ချိန်က အမိုက်စားသီချင်းလေးတွေ နဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့အသည်းကို ခြွေနိုင်ခဲ့တာကတော့ အုပ်စိုးခန့် ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့အောင်မြင်မှုတွေ များစွာရရှိထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူရဲ့သီချင်းလေးတွေ ကလည်း မိန်းကလေး ပရိသတ်တွေ ရဲ့ အားပေးမှုကိုအပြည့်ရရှိထားတာပါ။
ဒါပေမယ့်သူဟာ မကြာခဏဆို ဝေဖန်မှု တွေခံနေရတာပါ။ သူရဲ့လုပ်ရပ် ပုံရိပ်လေးတွေကြောင့် နောက်ပိုင်းမှာ ပရိသတ်တွေက သူကို ဝေဖန်မှုတွေလုပ်လာကြပြီး နာမည်လည်းကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ခုနောက်ပိုင်းမှာ တော့ အာဏာသိမ်းချိန် ကတည်းက ပရိသတ်ရှေ့ ပျောက်ကွယ်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီး တစ်ခြားအနုပညာရှင်များနည်းတူ Boycott အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့တာပါ။
ခုမှာတော့အဲ့လိုအခြေတွေ ကြားထဲမှာပါ အဆိုးဆုံး အရာတစ်ခုကိုလုပ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ BGF တပ်ဖွဲ့ဝင်များကြီးစိုးတဲ့ ကရင်ပြည်နယ်ကရွာလေးတစ်ရွာရဲ့ဘုရားပွဲလေးမှာ သီချင်းသွားဆိုခဲ့တာပါ။ မကြာခင်ကလည်း နာမည်ကျော်သရုပ်ဆောင် မြင့်မြတ် သွားခဲ့တာကြောင့်အကြီးကျယ်ဝေဖန်ခံနေရတာဖြစ်ပြီး ခုမှာလည်း သူကိုဝေဖန်နေကြတာပါ။ ဒါ့အပြင်သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာ ပါတင်ထားတာကြောင့် ပရိသတ်တွေကိုစော်ကားသလိုဖြစ်နေတာကြောင့် ဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါဦးနော်။
လက်ရှိ လာအိုနိုင်ငံမှာ ဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်လေးက ပိတ်လိုက်ရတာကြောင့် အများကြီးဆုံးရှုံးလိုက်တဲ့အကြောင်းပြောပြလာတဲ့ TikTok ဆယ်လီ ဇော်ဝင်းမောင်…